Laga soo bilaabo sanadkii 2003 dii, waxaa degaanka koofurgalbeed ee Gobolka Sool oo ay ka mid yihiin degaanada: Dabataag, Dhumay, Dharkayn, iyo degaamada ku hareeraysan oo ahaa degaan mudo dheer looga bartay nabad jacayl, deris wanaag, iyo xasilooni ku dayasho mudnaa in badana lagu soo caano maalay ka taagneyd coolaad aad u xun oo sababtay khasaare aad u weyn oo naf iyo maalba leh. Colaadaasi oo marxalado badan soo martay, marxaladahaasi oo ay ka mid yihiin in marar badan heshiis aan shaqayn laga gaadhayey, yaa iminka u muuqata mid faraha kasii baxaysa oo xalkeedu sii fogaanayo maalinba maalinta ka danbaysa. Dagaaladii ugu danbeeyey oo dhacay sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxay galaafteen dad ka badan 50 qof iyo dhaawac aan tiro lahayn, sida ay soo sheegayaan goobjoogeyaal iyo xogogaal degaanadaa ku sugan. Ilaa iminka dadka labada dhinac ka dhintay wuxuu ku dhowyahay 140 qof. Hadaba, waxaan halkan kusoo gudbinayaa falanqayn kooban oo ka hadlaysa: hordhac ku saabsan marxaladihii ay colaadani soo martay, cidda dagaalka hurinaysa, sababtay heshiisyadii hore u fashilmeen, iyo waxyaalaha aan u arko iney xalka soo dhoweyn karaan. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />